Umhleli wokumbozwa kwezinto ezihlosiwe kushiwo ngaphambili, enkambisweni yokuchichima, ikhwalithi yezinto ezihlosiwe iphakeme kunaleyo yomkhakha wezinto zendabuko..Kule ndatshana, umhleli uzoqhubeka nokwethula umthelela wokuhlanzeka nokufana kwezinto ezibonakalayo kulokho okukhonjiwe endaweni enamathela endaweni enkulu. Woza ufunde ngakho ~
Ukuhlanzeka kwento eqondiwe ekuhloleni kunethonya elikhulu ekusebenzeni kwefilimu okufanele isongwe.Lapho ingilazi ehlanzekile ingena ekamelweni elinamathela phezulu, uma ubumsulwa bezinto ezihlosiwe abwenele, izinhlayiya zokungcola ezintweni ezihlosiwe zizonamathela ebusweni bengilazi ngesikhathi senqubo yokuphalaza ngaphansi kwensimu kagesi nensimu kazibuthe. Isimo sokwehlukana sivela ngokuqinile, kuphakama ubumsulwa belitshe, ngcono ukusebenza kwefilimu efakiwe.
Okokuhlosiwe okungahambisi kahle kokushisa okushisayo, njengokuhlosiwe kweSiA1, ukutholakala kokungcola kwelitshe kuvame ukudala ukuthi ukushisa kokushisa kuvinjelwe, noma umehluko phakathi kokushisa kwamanzi okupholisa okusetshenzisiwe ekukhiqizeni kanye namazinga wokushisa wamanzi wokugcoba wangempela, njll., kubangela ukuthi ilitshe liqhume lapho lisetshenziswa. Ukuqhekeka okuncane ngeke kube nomthelela omkhulu ekukhiqizweni kwezingubo, lapho kunemifantu ebonakalayo ezintweni eziqondiwe, ukushaja kulula kakhulu ukugxila onqenqemeni lwengxenye yokuqhekeka, okuzodala ukukhishwa okungavamile endaweni eqondiwe..Ukukhishwa kwesimo kuzodala ukwehla kwe-slag, ukwakheka kwefilimu okungavamile, kanye nokwanda komkhiqizo, ngenqubo yokulungiselela umgomo, ngaphezu kokulawula ubumsulwa, izimo zenqubo yokulungiselela kufanele futhi zilawulwe.
Ngokuqondiwe kwe-alloy, ukwabiwa okungalingani kwezinto kuvame ukwenzeka, njengokuhlanganiswa kwe-aluminium kunhloso ye-SiAl, ukuhlukaniswa kwe-aluminium kulitshe le-zinc-aluminium (isisindo se-athomu se-aluminium 27 ngaphansi kwesisindo se-athomu se-zinc 65, futhi i-aluminium ipholile ngesikhathi senqubo yokupholisa ngemuva kokuthela. Izodada phezulu, kubangela okuqukethwe kwe-aluminium ephezulu ohlangothini olulodwa futhi iphansi ngakolunye uhlangothi).Ngenxa yendawo encibilika ephansi, u-Al ohlangene we-target ye-SiA1 ujwayele ukuba ngumdaka ngesikhathi senqubo yokwakhiwa kwamafilimu, futhi inani le-A1 elengezwe ngesikhathi senqubo yokufafaza liqinisekile. Lapho ingxenye yokuhlangana kwenzeka, kukhombisa ukuthi okuqukethwe i-aluminium kwezinye izindawo kuncane, ethinta ilitshe le-SiA1. Ukuqhutshwa kokushisa nokushisa kwegesi kwefilimu, okuholela ekushoneni kwesilinganiso sokungqubuzana, ukungafani kahle kwefilimu, ukuqhekeka kwezinto ezihlosiwe, kubhebhethekisa isimo sokukhishwa kwethagethi, futhi kunciphisa nezinga lokwakheka kwamafilimu.Ukuhlukaniswa kwezinto ezihlosiwe kuzothinta izinga lokuxhuma (ukufana kwefilimu) nokwakheka kwamafilimu.Ngakho-ke, ngaphezu kokulawula ubumsulwa bento eqondisiwe, ukwabiwa kwento kulitshe le-alloy nakho kubaluleke kakhulu.
Prev: Kungani ifilimu yomkhiqizo iwela ngesikhathi sokugcoba komshini ？？
Next: Ubuningi obuhlobene kanye ne-porosity yezinto ezihlosiwe kuthinta kanjani ikhwalithi yengubo coating